Raila Odinga oo kulan la qaatay madaxda ismaamulka Kilifi ee ka tirsan isbaheysiga Azimio La Umoja - Iftiin FM
Raila Odinga oo kulan la qaatay madaxda ismaamulka Kilifi ee ka tirsan isbaheysiga Azimio La Umoja
by Iftiin FM Reporter May 12, 2022
Musharaxa kursiga madaxweyne ee isbaheysiga Azimio la umoja – One Kenya Alliance ee Raila Odinga ayaa ballan qaaday in uu furi doono dhaqaalaha gobolka xeebta isaga oo sahaminaya dhaqaalaha buluugga ah.
Dr.William Ruto oo ka hadlay biilka wax ka badalka sharciga xisbiyada siyaasadeed
Musharaxa madaxweyne ee isbaheysiga Azimio La Umoja ee Raila Odinga ayaa sheegay in marka loo doorto kursiga madaxweynaha uu taageeri doono ganacsatada Juakali ee boqolkiiba 34 ka qeyb qaata wax soo saarka guud ee dalka.
Giddiga IEBC oo diyaariyey sidii looga hortagi laha rabshadaha doorashooyinka.
Ra’iisul wasaarihii hore ee dalka Kenya ayaa sheegay in la diyaariyay habab lagu kobcin doono dhaqaalaha dalka.
Raila Odinga oo kulan la qaatay madaxda ismaamulka Kilifi ee ka tirsan isbaheysiga Azimio La Umoja ayaa si kulul u cambaareeyay barasaabka ismaamulka Kilifi, Amason Kingi oo ku biiray isbaheysiga Kenya Kwanza.
Bayern Munich oo uu dhaqaaqday saxiixa Paul Pogba
Madaxweynaha Somaliland oo soo dhaweeye Wafdi ka socda Senegal
Isticmaalka baraha bulshada oo dhalinyarada ku batay
Raila Odinga oo soo saaray barnamijyo lagu horumarinayo dhaqaalaha dalka
Professor George Magoha o ka hadlay ardeyda wax ku bartaan Manhajka Cusub ee CBC-da